Sombintsombim-baovao - ewa.mg
News - Sombintsombim-baovao
Karate: Hotanterahina ny 10 sy ny 11 aogositra izao ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, taranja karate, ho an’ny taom-pilalaovana 2019. Hifaninana amin’izany ireo mpikatroka voatsonga nandritra ny fiadiana ny tompondaka isaky ny ligy. Hafana vay, araka izany, ny fifaninanana satria hifampitady ireo efa kalaza sy mpikatroka mahay avokoa. Ny 10 aogositra ny hanaovana ny fifanintsanana ary alahady 11 aogositra kosa ny famaranana eny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Basikety: Haroso ny volana septambra izao ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, taranja basikety, araka ny fanazavana nentin’ny filohan’ny federasiona malagasy ny basikety. Handray anjara amin’ny fifaninanana fifanintsanana ny “Basketball Africa League” ka izay ny anton’izao fanovana ny daty izao. Marihina fa tsy isan’ireo firenena enina voafidy handray anjara, tsy mandalo fifantenana, i Madagasikara ka tsy maintsy miatrika ny lalao fifanintsanana.
Rugby Top 20: Tontosa, omaly alahady, teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny fifanintsanana hiakarana amin’ny Top 20, andro voalohany, taranja rugby. Nirava tsy lera ny lalaon’ny FTBA sy ny Hiza17 teo amin’ny 58 minitra. Naneho ny alahelony nanoloana ny fomba fitsarana ry zareo avy eny Angarangarana. Toy izao ny voka-dalao rehetra: Asa Ambohimanarina (18) # (19) VTMA Antsalovana, TFMA Ankasina (24) # (5) FBM Bemasoandro, 3F5 Amboditsiry (24) # (25) Matadore Anosipatrana, FTBA Andohatapenaka (23) # (15) Hiza17 Angarangarana.
L’article Sombintsombim-baovao a été récupéré chez Newsmada.
Lavanila 2020-2021: nahemotra ny fanondranana
Tapaka tamin’ny filankevitry ny minisitra ny fanemorana ny taom-bokatra 2020-2021. Raha tokony hifarana ny 31 mey ny fahafahana manondrana lavanila, mihemotra ny 30 jona izany, noho ny fangatahan’ny vondron’ireo mpandraharaha sy fihenoana azy ireo hatrany. Miakatra izao ny tahan’ny fampiasana lavanila any Etazonia sy Eoropa, mifandraika amin’ny fisintahana amin’ny fihibohana, mampisokatra ny toekarena any amin’ireny firenena mpanafatra ireny.“Tamin’ny herintaona efa naka fepetra manokana toy izany, satria nanahirana ny fitahirizana sy ny fanondranana. Nisy ireo vokatra tavela nahazoana tinady, antony iray ihany koa fanemorana ny taom-bokatra”, hoy ny minisitry ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa. Ny faran’ny volana avrily, nisy 1780 t naondrana avy eto Madagasikara; tamin’ny 23 mey teo, nahatratra 2050 t, efa nihoatra lavitra ny vokatra azo raha oharina ny tany aloha. Koa raha nangataka fanemorana ireo mpandraharaha, mbola miandrandra 150 t eo ho eo, hatramin’ny faran’ny volana jona.Tsara ny kalitao, mitombo ny tinadyTsara ny kalitaon’ny vokatra, nanomboka 2019. Ny tinady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena koa misy fiakarana isan-taona, manosika ny tantsaha hanome vokatra tsara. Mbola i Etazonia sy Eoropa no manjifa ny 80 % ny vokatra avy aty Madagasikara. Misy ny sokajy indostrialy sy ny sokajy tsotra amin’ireo mpanondrana. Ny 90 % tamin’ireo vokatra naondrana tao amin’ny sokajy indostrialy daholo. Izany hoe, matihanina, manana traikefa, manana fitaovana, sns. Koa apetraka ho fomba fiasa izany amin’ity sehatra ity. R.Mathieu Fisokafan’ny taom-bokatra 2021-2022-Faritra Diana sy Sofia (voalohany isan-taona) : 20 mey 2021-Faritra Anosy, Atsimo Atsinanana , Vatovavy Fitovinany : 14 jiona 2021-Faritra Sava sy Analanjirofo (fotoam-piotazana lehibe) : 5 jolay 2021-Mihena ny halatra lavanila eny am-potony.-Tsy mahazo midina 75 000 Ar ny kilao mandra-pijoron’ny CNV-Mamoaka ny vidiny ara-dalàna ny fanjakana, miainga avy amin’ny CNV sy ny CRVL’article Lavanila 2020-2021: nahemotra ny fanondranana a été récupéré chez Newsmada.
Fikambanana Fitia-Norvezy-UNFPA: vehivavy 30 niharan’ny herisetra nofanina sy nomena fitaovana
Renim-pianakaviana miisa 30, nianjadian’ny herisetra no nanaraka fiofanana marolafy ka notoloran’ny fikambanana Fitia sy ny Norvezy ary ny Fnuap fitaovana mba hanatsarany ny velontenany.« Hametraka fitarainana amin’ny olana teo anivon’ny tokantrano no nanatona ny ivontoerana manokana ety Mahamasina nefa voantso hanao fiofanana izahay raha vantany vao voaray teto. Sempotry ny olana ny vatana sy ny saina ka nanampy betsaka ny taranja fampivoarana ny maha olona ankoatra ny fiofanana asa tanana. Amin’izao fotoana izao, vehivavy mijoro izahay ary vonona hiatrika ny fiainana », hoy ny iray amin’ireo vehivavy niharan’ny herisetra ka nila tohana teny amin’ny ivontoerana fandraisana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy, Mahamasina. 30 mirahavavy izy ireo ary samy nanana ny karazana herisetra nianjady taminy avy, nandondona teny amin’ny ivontoerana ka noraisina hanaraka fiofanana. Iray volana ny faharetan’ny fiofanana ka tafiditra ao avokoa ny fampivoarana ny maha olona hifehezana ny fihetseham-po sy fahafantarana ny tena manokana, fitantanana sy fihariana, fandrindram-piterahana ary asa tanana arakaraka ny safidy. Zaitra, nahandro (fanaovana mofomamy) ary petakofehy no nisafidianan’izy ireo hofehezina ka ho fidiram-bola maharitra any aoriana. Nomena fitaovana (milina, lafaoro…) entiny miainga amin’ny fihariana izy 30 mirahavavy anatin’ny andiany Fandresena.Vehivavy iray amin’ny telo iharan’ny herisetra“Vehivavy malagasy iray amin’ny telo no efa niharan’ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina, araka ny fanadihadiana, hoy ny nambaran’ny solontenan’ny UNFPA”, i Koffi Kouame, omaly. Mendri-piderana ny tohana entin’ny fikambanana Fitia satria manampy ireo vehivavy hitraka aorian’ny herisetra. Nanampy tamin’ny fanomezana ny fampitaovana ny Norvezianina sy ny UNFPA. Ny filohan’ny fikambanana Fitia, rahateo no masoivohon’ny ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy. Notoloran’ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy ny taratasy fanamarihana ny fahavitan’ny fiofanana sy ny fitaovana izy 30, omaly. Mbola hitohy amin’ny fiofanana informatika ny tohana satria nahazo fitaovana momba izany ny ivontoerana.“Ankoatra ny fiofanana, ahitana fandraisana an-tanana araka ny lalàna, fahasalamana sy ara-tsaina ao amin’ny ivontoerana”, hoy ny filohan’ny fikambanana Fitia.VonjyL’article Fikambanana Fitia-Norvezy-UNFPA: vehivavy 30 niharan’ny herisetra nofanina sy nomena fitaovana a été récupéré chez Newsmada.
Politika ankapoben’ny fanjakana: homena lanja ny vakoka ara-kolontsaina…
Tafiditra ao anatin’ny fandaharanasa fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana ny fanatsarana ny tontolon’ny kolontsaina. Nanasongadina izany teny amin’ny antenimierampirenena ny praiminisitra…Manankarena ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy ! Tsy hijanona ho resaka fotsiny intsony izany fa hiroso amin’ny fikoloana sy fanatsarana ary fampivelarana izany ny fitondram-panjakana. Tafiditra ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana ny hanavaozana ireo vakoka ara-kolontsaina sy ara-tantara marobe misy eto Madagasikara. Hanamboatra mozea hampirantiana harembakoka ananan’i Madagasikara manerana ny faritra maro ihany koa ny fanjakana. Anisan’ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian fa hovitaina alohan’ny volana jona 2020 ny asa famitana ny Rovan’Antananarivo.Akoatra ny fanavaozana ny vakoka ara-kolontsaina sy ara-tantara, hanomboka amin’ity taona ity ny asa fanamboarana ny akademia nasionaly taozavatra sy kolontsaina (Académie Nationale des arts et de la culture) mba hahafahana manofana sy mampivoatra ireo ho tena matihanina amin’ny sehatry ny kolontsaina. « Tanjona ny hitantanantsika amin’ny tokony ho izy ireo harena ananantsika eo amin’ny sehatry ny kolontsaina », raha ny nambaran’ny praiminisitra hatrany.… Ho an’ny mpanakanto, anisan’ny mahamaika azy ireo ihany koa ny fijerena akaiky ny olana mianjady amin’ny sehatra tsirairay. Anisan’izany ny piraty sy ny fanaovana dika mitovy, ny tsy fahampian’ny efitrano na kianja filalaovana (teatra, hiragasy…).HaRy RazafindrakotoL’article Politika ankapoben’ny fanjakana: homena lanja ny vakoka ara-kolontsaina… a été récupéré chez Newsmada.
Fandraisana ny anaran’ireo mpino
Nifarana afak’omaly 31 jolay ny fisoratana anarana teny amin’ireo Diosezy ho an’ireo mpino rehetra manerana ny Nosy, izay maniry ny hanatrika ny fiaraha-mivavaka amin’ny Papa François, etsy Soamandrakizay Androhibe, amin’ny 8 septambra ho avy izao. Ho hentitra ny fitandroana ny filaminana amin’io fotoana io satria hiara-hientana ireo mpitandro filaminana sy ireo skoto. Voafetra ho manodidina ny valo hetsy ny isan’ny olona zakan’ny toerana handraisana ny lamesa ka izay nahazo karatra fanomezan-dalana avy any amin’ireo Diosezy ihany no ho tafiditra. Andrasana amin’ny faran’ity volana aogositra ity kosa ny fahavitan’ny fananganana an’ireo fotodrafitrasa handraisana izany. L’article Fandraisana ny anaran’ireo mpino est apparu en premier sur AoRaha.
Andrasan’ny mpitatitra eny amin’ny Fasan’ny karàna ny fihaonana amin’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny toetrandro mikasika ny famindrana azy ireo eny amin’ny tobim-piantsonana Amoronankona. Mbola mitana ny fanapahan-keviny amin’ ny tsy fankasitrahan’izy ireo ny toerana ireo mpitatitra noho ny halavirana sy ny tsy fetezan’ny fotodrafitrasa ho azy ireo. “Efa nilaza ny minisitra fa tsy terena ny olona hanatanteraka izany, taorian’ny fihaonana taminy sy ireo solontenan’ny mpitatitra eto Madagasikara. Miandry ny fampiantsoan’ny minisitra indray izahay ka miankina amin’izay no ahitana ny tena fanapahan-kevitra farany. Tsy mbola nisy didim-pitondrana aloha hatreto mikasika ny famindrana anay eny an-toerana”, hoy Andrianaivo Andrien, mpitantana ny toby fiantsonana Fasan’ny karàna. Notsindrian’itsy farany fa tsy mety amin’ny filàn’ny kaoperativa sy ny mpitatitra ary ny mpanjifa ny fotodrafitrasa eny an-toerana. Efa nilaza ny minisitra Tinoka Roberto fa hiarahana midinika daholo ny zavatra hotapahina rehetra hoentina mampandroso ny tontolon’ny fitaterana, ny dinika araka asa rehetra eo amin’ny asa fitaterana manerana ny Nosy. Andrasana, araka izany, ny mety ho vokatry ny fihaonan’ny roa tonta. L’article Fifindrana eny amoronakona :: Miandry fihaonana amin’ny minisitera ny mpitatitra est apparu en premier sur AoRaha.